Notanterahina, omaly, tetsy amin’ny Parvis Analakely ny hetsika fanamarihana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny aretina VIH/Sida. Nisy ny fitiliana maimaim-poana natao ho an’ireo liana te hahafantatra ny fahasalamany.
Eto Madagasikara, 0,28% ny tahan’ny olona mitondra ny aretina. Ambany izany raha oharina amin’ny firenena afikanina hafa. Na izany aza, misy hatrany ny olona vaovao voatily fa mitondra ny aretina. Anisan’ny betsaka mitondra ny tsimokaretina VIH/Sid any any amin’ny faritra Diana, Boeny ary Atsinanana. Manodidina ny 35 taona ny salan-taonan’ireo olona mitondra izany.
Manodidina ny 500.000 isan-taona eo kosa ireo olona vita fitiliana. Marihina fa anisan’ny manao ity fitiliana ity ny reny bevohoka izay takian’ny dokotera mpanara-maso mihitsy izany.
Misokatra ho an’ny rehetra ny toerana fanaovam-baksiny maimaim-poana (vaccinodrome) etsy akaikin’ny Jumbo Score/Sanifer/Quicklane etsy Ankorondrano. Misokatra hatramin’ny asabotsy izao ity toerana ity izay manakaiky indrindra ireo mpiasa manodidina iny toerana iny. Mitondra kara-panondrom-pirenena ireo maniry ny hanao vaksiny eny. Tsiahivina fa miha-mitombo ireo tranga covid19 tato anatin’ny roa herinandro izao ka anisan’ny fiarovan-tena tsara indrindra ny fanaovam-baksiny anoatra ireo fanajana ny fepetraara-pahasalamana rehetra.